Nandritra ny Taona Dimy, Mamerina Foana ny Antso Hamotsorana Azy ny Fianakavian’ilay Saodiana Bilaogera, Raif Badawi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, bahasa Indonesia, Português, Español, Ελληνικά, Italiano, English
Iray amin'ireo saribe fanentanan'ny Amnesty International ho an'i Raif Badawi. Loharano: Twitter.
Takian'ireo mpikatroka ny hamotsorana an'i Raif Badawi, ilay Saodiana mpikatroka , izay efa nahavita taona dimy tamin'ny sazy fampidirana am-ponja 10 taona nomena azy.
Tamin'ny 2013, nomelohin'ny fitsarana iray ao Jeddah misahana ny heloka bevava ao Arabia Saodita hifonja fito taona sy hizaak kapoka karavasy 600 i Badawi noho ny fiampangàna azy ho “naniratsira ny finoana Silamo tamin'ny alàlan'ireo fantsona elektronika”.
Nanenjehana an'i Badawi ny namoronany ny bilaogy “Arabo Saodita Liberaly”, sehatra iray fifampiresahana ety anaty aterineto natombony tamin'ny 2008 iresahana ny anjara asan'ny finoana ao anatin'ny fitondram-panjàka fatra-pitahiry ny nentindrazana.
Tamin'ny 2014, nakarina ho 10 taona miampy kapoka 1000 ny saziny.
Ny fanentanana nataon'ny Amnesty International no akaiky indrindra. Ilay vondrona mpiaro zon'olombelona dia niaraka niasa tamin'i Ensaf Haidar, vadin'i Raif Badawi, sy ireo zanany telo izay monina any Sherbrooke, Kanadà, mba hanampy amin'ny fanafahana an'i Raif.
Namoaka lahatsary iray ahitàna ireo zanany telo ry zareo, mangataka ny hamotsorana ny rain'izy ireo.
– Amnesty International (@amnesty) 17 juin 2017
10 taona, kapoka 1.000 noho ny nanoratana bilaogy. Feno dimy taona androany ny nisamborana an'i Raif Badawi. Manana hafatra iray ho an'i @KingSalman #FreeRaif ireo zanany
- gadra 10 taona, kapoka 1.000 noho ny nanoratana ho an'ny fandriampahalemana.
– Tsy rariny hoe any am-ponja ny rainay. Tsy namono olona izy.
– Ampy ho anay izay.
– Namorona bilaogy fotsiny no nataony.
– Tsy araka ny lalàna izany.
– Ela loatra no niandrasanay.
– Mila mahita ny rainay izahay.
– Ny tena ahatsiarovako indrindra ny raiko…
– dia ny tsikiny toy ny areti-mifindra.
Ao amin'ny Twitter, ny kaontin'ny Amnesty International dia nanasa ireo mpanjohy azy mba handefa avy hatrany ny bitsika ho any amin'i Salman Mpanjakan'ny Arabia Saodita, mangataka aminy hamotsotra an'i Raif.
Efa nahavita taona dimy sahady tany am-ponja i @Raif_Badawi Noho ny fanoratana bilaogy fotsiny. Ilazao ny @KingSalman fa be loatra izany 5 taona izany – tsy maintsy afahany i Raif ankehitriny!
Nizara hafatra fanampiny ihany koa ireo zanak'i Raif tao amin'ny tranonkalan‘ny Amnesty.
“Rehefa niala teto ho any Kanadà izahay, nihevitra aho fa hanao zava-mahagaga ho anay ianao eny an-tseranam-piaramanidina. Saingy tsy teny ianao. Mbola tezitra foana aho,” hoy ny nosoratan'i Najwa, 14 taona.
“Nandritry ny fotoana lava indrindra, noheveriko ho nandao anay ianao. Noheveriko ho tsy tia anay na tsy miraharaha. Nandritry ny fotoana lava indrindra, nankararirary ahy ny momba an'i Neny. Inona no hanjo anay tsy eo anilanao?”
Miriam, 10 taona, vao efatra taona monja fony izy nahita farany ny rainy. Hoy izy nanoratra: “Miezaka ny mitadidy anao aho. Ny feonao, ny fihinao, saingy tsy efako. Mbola kely loatra aho, nisaringotra tamin'i Neny fony izahay namela anao no sady lasa nihazakazaka nandositra.”
Nodidiana ihany koa ilay ranamana 32 taona mba handoa sazy ara-bola iray tapitrisa riyals (eo amin'ny 266.600 dolara amerikàna). Tamin'ny Janoary 2015, efa nizàka ny 50 tamin'ireo vely karavasy 1.000 tokony hozakainy izy. Nahemotra noho ny faharatsian'ny fahasalaman'i Badawi ny andiany faharoa amin'ny kapoka tokony hatao aminy.